ဖခင်…နဲ့သား…. ဘယ်သူ ပို မှားသလဲ….? ? ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဖခင်…နဲ့သား…. ဘယ်သူ ပို မှားသလဲ….? ? ?
ဖခင်…နဲ့သား…. ဘယ်သူ ပို မှားသလဲ….? ? ?
Posted by alinsett on Sep 12, 2011 in Arts & Humanities, Myanmar Gazette, Poetry, Short Story | 13 comments
Paul Theroux ၏ The Mosquito Coast ကို ခံစားကြည့်ခြင်း။
(ယခု ကျွန်တော် တင်ပြမည့် အကြောင်းအရာကို အမေရိကန်စာရေးဆ၇ာကြီး Paul Theroux ၏
အဲဒါမျိုးဇာတ်လမ်း ရှေးဟောင်းမြန်မာပုံပြင်အနေနဲ့ ရှိတယ်။ သားမိုက်က မိခင်ကို သေခါနီးမှာ နားရွက်ကိုက် ဖြတ်ပစ်တာ။ မင်းမသိ ဗာရာဏသီ ဇာတ်လမ်းမျိုးပဲ။ ဘယ်သူက စောလည်း မူရင်းကြလည်း သိသူများ ပြောကြပါအုံး။
ဘယ်လိုကြောင့်ဘဲဖြစ်ပါစေ မိဘမှားလဲခံရမှာပါ၊မိဘ ကိုမလွန်ဆန်သင့်ပါဘူး။ငရဲ တော့မီးမီး ကြောက်ကြောက်….
ဘယ်သူပဲမှားမှား အဖေဟာ အဖေပါပဲ။
ဖန်တီးပေးခဲ့ တဲ့…အဖေ့ အပြစ် အတွက်ပါ..။*** အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင် အဖေက တွန်းပို့ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူခဲ့တာပါ။ ကိုယ့်အသိဥာဏ်နဲ့ကိုယ် မှား၏ မမှား၏ဆိုတာကတော့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမှာပေါ့။ အကယ်၍ အောင်မြင်လာရင်ရော ဒါ အဖေ့ကြောင့်လို့ပြောမှာလား?? ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့လို့ လို့ပြောမှာလား ??
စဉ်းစားတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်ချိန်ကစပီး အကောင်းဆုံးခွဲတတ်တဲ့အသိရှိလာဘီဘဲ။ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်နေအုံးမှာလဲ။ မိမိ ကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာလေ။
စောရသူခိုးတယောက်နဲ့.. ကလေးကို..ငယ်စဉ်ကတည်းက.. ခိုးတတ်အောင်.. လမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့..အမေဇတ်လမ်း..ဘုရင်ကဖမ်းမိတော့.. အမေ့နားရွက်ကိုက်တဲ့ဇတ်လမ်း.. မြန်မာ့ပုံပြင်တွေထဲရှိပြီးသားပါ..။
အိန္ဒိယ အော်ရီဂျင်နယ်လို့..ထင်တယ်..။ ဆိုတေ့ာ.. ဗာရာဏသီလုပ်ပြိး.. ဘုရားဟောတောင် လုပ်ထားသလားတော့ ..မသိ….
ပြောရရင်.. အပေါ်ကဇတ်လမ်းက.. အနောက်တိုင်းမှာ သိပ်ပြောလေ့..ယုံကြည်လေ့မရှိဘူးထင်မိတယ်..။
အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုက.. (အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့)သားသမီးဆိုးတာ.. မိဘနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြီးပတ်သက်တယ်.. မပြောကြသလို.. တာဝန်လည်း မယူခိုင်းဘုး..။
ဥပမာ.. ဘင်လာဒင်လိုကမ္ဘာကျော်အစွန်းရောက်ဖြစ်နေလည်း.. မိဘ..ဆွေမျိုးတွေနဲ့.. ပါတ်သက်ပြောကြ..အေ၇းယူကြလေ့လည်း မရှိကြဘူး..။
(အပေါ်ကဇတ်လမ်းအရ)သားက.. သူဆိုးတေတာ အဖေကြောင့်ပါဆိုပြိး.. အဖေ့နားရွက်ကိုက်ဖြတ်ရင်.. အနောက်တိုင်းမှာတော့.. အဲဒီလူ ဥပဒေအရ.. ပိုပြီး အရေးယူခံရမှာပဲရှိသွားလိမ့်မယ်..ထင်မိတယ်..။
ဦးသုခ ရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ ရုပ်မြင်ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ကို သတိရတယ်။
မြန်မာ့အသံက လွှင့်သွားတာလေ။ အဖေ နဲ့ သား တဲ့။
ဇော်လင်းက အဖေ၊ ကျော်သူ က သား။ ဇာတ်ရဲ့ အဓိက ဆိုလိုရင်းကို ဇာတ်လမ်းဆုံးတော့
” အဖေ နဲ့ သား
ရှိကြသည် ” တဲ့။ ကျွန်တော်က တော့ အဲဒီလိုပဲထင်ပါတယ်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ …။ မန်းကြသူတွေ အားလုံ့း ရဲ့စကားလေးတွေ က တွေးစရာ လေးတွေပါပဲ။
ူုkai..ပြောတာလည်း ဟုတ်တာပဲ..။shwe ei ပြောတာလည်း ဟုတ်တာပဲ..။
မီးမီးသော် နဲ့ချစ်လေး..ပြောတာလည်း မှန်တာပါပဲ။။
ကိုယ် လည်း အဲဒီ အတွေးတွေ ကို တွေးမိပါတယ် ။
ဘာပဲ.ဖြစ်ဖြစ် ၀င်ပြောကြ ဆိုကြတာကို ကျေးဇုးတင်ပါတယ် ။
ကျမကတော့ blackchaw ပြောတဲ့
ရှိကြသည် ” တဲ့။
အပြန်အလှန် မှီတွယ်နေကြရတဲ့ ဆက်နွယ်နေကြရတဲ့ ပတ်သက်မှုတွေမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် သိတတ်နားလည်မှုတွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်။
သားသမီးမကောင်း မိဘခေါင်းဆိုသော်လည်း …..
မိဘတွေ ဆုံးမသွန်သင်နေတဲ့ကြားက ပျက်စီးနေတဲ့သူတွေ၊ သူတပါးအပေါ်မတရားလုပ်နေသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။
မိဘတွေ ဆုံးမသွန်သင်မှုမှ ဝေးကွာခဲ့သော်လည်း (သို့)မိဘမဲ့ ဖြစ်သော်ငြားလည်း လိမ္မာရေးခြားရှိသူ၊ အများအကျိုး တပိုင်တနိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သူများလည်း ရှိနေပါသည်။
အဓိကကတော့ မိမိ မတရား လောဘ၊ ဒေါသ၊ သောက၊ မတရား ရလိုမှု၊ မတရားဖြစ်ချင်မှု တွေကို ဘယ်လို စွန့် ရမလဲဆိုတာ နားမလည်လို့ပါပဲ။
(((ကိလေသာ တွေကို မစွန့်တတ်တာ အဓိက တရားခံပါ။)))
တချို.သားကမီးတွေကျတော. အထင်လွဲမှုတွေရှိမယ်ထင်တယ်နော်….ဥပမာ မကောင်းတာကိုမလုပ်ဖို.တားပေမဲ. ချုပ်ချယ်တယ်ထင်တာမျိုးပေါ…မိဘဟာမိဘ ပါပဲ…ဒါဟာရေပေါ်အရုပ်ရေးတာ..သဲသောင်ပေါ်စာရေးတာမဟုတ်ပါဘူး……..သွေးနဲ.ဆက်သွယ်ထားတာပါ
မြန်မာပုံပြင်စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ် ဒီခေတ်မှာ အဲဒီလိုမိဘတွေ သားသမီးတွေ ပိုများလာပြီ မိဘတွေကတော့ ချစ်လွန်းလို့ အလိုလိုက်ထားရာကဖြစ်ကြတာများပါတယ် သားသမီးကလည်း ရှေးခေတ်ကလို များများမယူနိုင်ကြတော့ မွေးထားတဲ့ တယောက် နှစ်ယောက်လောက်ကိုပဲ ပုံအောချစ် ရာကစတော့တာပဲ